Ikhampasi: Fumanisa iiComputer eziqhuba ukuGcina abaThengi | Martech Zone
Ikhampasi: Fumanisa iiComputer eziqhuba ukuGcina abaThengi
NgoLwesibini, Matshi 8, 2016 NgoLwesibini, Matshi 8, 2016 Douglas Karr
Ngokutsho isifundo ukusuka kwi-Econsultancy kunye ne-Oracle yokuThengisa iLifu, i-40% yeenkampani zigxile ekufumaneni kunokugcina. Uqikelelo olukhoyo kukuba kubiza imali ephindwe kahlanu ukutsala umthengi omtsha kunokugcina umntu okhoyo ngoku.
Okubaluleke nangakumbi, ngokoluvo lwam, ayizondleko zokufumana okanye ukugcina umthengi, yingeniso kunye nenzuzo yokwandisa ubomi bomthengi enceda ngokwenene ukusebenza kwenkampani. Kwaye oku akuthatheli ngqalelo ifuthe lokwabelana nabathengi ngoku kunye nokutsala abathengi abatsha. Ukubeka nje, ukugcinwa kunamandla njengokudibanisa inzala kwiakhawunti yakho yomhlalaphantsi.
Ikhampasi ngobungakanani bayo ivumela abaphuhlisi beqonga ukuba babone indlela yokuziphatha komsebenzisi kwaye babonakalise ifuthe lokuziphatha kwabo ekugcinweni kwakho ngokubanzi. Ukuba uyakuqonda oku, emva koko unokusebenzela ukuphinda wenze iinjineli kwaye wandise amaqonga akho ukukhuthaza ukugcinwa.
I-Compass ihlola ngokusebenzisa idatha yakho yomsebenzisi kwaye ichonge indlela yokuziphatha eqikelela ukugcinwa. Ukuqonda ezi ndlela zokuziphatha sisitshixo sokuphucula imveliso yakho kunye nokuqhuba ukukhula okuzinzileyo.
Inkampani inesifundo semeko esivela QuizUp, Enye yezona zinto zinkulu kwezentlalontle zezicelo zentengiso kwimarike. Ngokuhlalutya isimilo sabathengi, babenako ukuphucula ukugcinwa kwesicelo sabo.
Nanku umboniso weCompass.
tags: ubukhulungobungakanani bekhampasiikhampasiukugcinwa kwabathengiUhlalutyo lokugcina abathengiUhlalutyo lokugcina
Iindlela ezi-5 zoNxibelelwano noLuntu abaSebenzi bokuPhucula iiPaki zabo